Iindaba - I-resin bond bond diamond
Intambo yebhondi Iipleyiti zokucoca idayimane zezinye zeemveliso zethu eziphambili, sibe kweli shishini ngaphezulu kweminyaka eli-10.
Intlaka ipeyinti ipeyinti ipolishi zenziwe ngokuxuba kunye nokutofa umgubo wedayimani, i-resin, kunye neefilitha emva koko zicinezelwe ngokushushu kumatshini wokushicilela, emva koko zipholise kwaye zidilize ukwenza umaleko wokugaya.
I-Resin bonded matrix yenye oza kuyibona isetyenziselwa zonke iintlobo zezixhobo. Nangona ezi pads zokucoca zibukeka zifana kakhulu zahlukile kakhulu. Ngapha koko inani leedayimani, ubunzima bebhanti yentlaka kunye nephethini ebusweni zonke zidlala indima kwintsebenzo.
Zonke iintlobo zezinto eziguqukayo zidlala indima kwiimpawu ezichanekileyo ezifunekayo kwiipads zokucoca amatye. Umzekelo, elinye ilitye lithambile kwaye elinye linzima. Yiyo loo nto iphedi yokucoca izakunxiba ngokwahlukileyo ukuba isetyenziswa kwimabhile kunokuba iza kusetyenziswa xa isetyenziswa kwi-quartzite okanye kwi-granite. Okwangoku, enye indoda yenza izinto ezinje nge-quartz inezinye iimpawu ezifuna ukuthathelwa ingqalelo. Umzekelo, ukudala ubushushu obuninzi ngexesha lenkqubo yokupolisha kunokubangela ukuba kuphawulwe kwilitye.
Ngenxa yezi zizathu zingasentla kunye nezinye, uya kufumana uninzi lweepads zokucoca. 3 Inyathelo lokucoca iPads, 5 Inyathelo lokuPolisha iiPads, kunyeAmanyathelo amaPads wokucoca inyatheloziinkqubo ezimbalwa ezinikezelwa ngeephedi zokucoca. Ke kukho iipads zokucoca ezenzelwe i-quartz kunye nezinye ezenziwe ukuba zikunike amandla okomisa ipolishi. Nganye kwezi zinobunzima bebhondi eyahlukileyo, ukubalwa kwedayimane, kunye namanqanaba amaxabiso. Umbono kukuba ufuna ukumisela ukuba zeziphi iiphedi ezisebenza ngokugqwesileyo kumatshini wakho.
Ke ngoko, nceda uqonde ubunzima bomgangatho, kwaye iindlela zokucoca (ezomileyo okanye ezimanzi) ukhetha kuqala, emva koko uya kuba nakho ukukhetha iiphedi zokucoca ezifanelekileyo.